महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मुगाको अवैध कारोबार गर्ने विदेशी नागरिकसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
ऐतिहासिक विष्णुकुण्डल पोखरीमा डुबेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मध्यपुर थिमि ४ विष्णुकुण्डल पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर जुगल गाउँपालिका–५ बराम्ची सिन्धुपाल्चोक घरभई मध्यपुर थिमि भिमसेन चोक बस्ने १७ वर्षीय विवेक अधिकारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चैतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाललगायतको बैठकले रानीपाखेरीमा राखिएका सबै कंक्रिट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
नुवाकोटकी कुमारी विश्वकर्मा बालुवा चाल्ने गर्थिन् । उनकी श्रीमान् काजीमान इँटा ओसार्ने । श्रीमान्/श्रीमती मिलेर राजधानीमा घर बनाउने ठाउँमा निर्माण सामग्री ओसार्ने ठेक्का लिने गर्थे । त्यहाँबाट हुने आम्दानीले घर खर्च चलाउँथे ।
जाडो होस् या गर्मी, घरमा होस् या सार्वजनिक ठाउँ उनी गम्लङ्ग पछ्यौरा ओढछन् । कसैसँग बोल्न पनि त्यति मन गर्दिनन् । कोही व्यक्ति आफ्नो अगाडि उभिँदा मात्रै पनि उनलाई डर लाग्छ ।
विश्व कीर्तिमानका लागि प्रवचन
योगसाधक एवं उत्प्रेरक वक्ता अनन्तराम केसीले विश्व कीर्तिमान राख्ने उद्देश्यसहित ९० घण्टा निरन्तर वक्तव्य/प्रवचन दिने भएका छन् ।
टेलाल साहका कान्छा छोरा अहिले नेपाल प्रहरीको असई छन् । भर्खरै ‘पासआउट’ भए । उनी आमाको पेटमा छँदा साहले पहिलोपल्ट सुन्दरीजलबाट जल भरेर पशुपतिनाथलाई चढाएका थिए ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करका शीर्षकमा पहिलेभन्दा करिब ४० प्रतिशतसम्म बढी रकम उठाउन लागेको भन्दै कीर्तिपुरवासी विरोधमा उत्रिएका छन् । बिहीबार ठूलो संख्यामा भेला भई स्थानीयले नगर कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीसहितको टोली स्थानीय तहको २०७४/७५ मा भएको कामको अनुगमन गर्न महांकाल गाउँपालिकाका पुग्यो । टोलीले गाउँपालिकामा विकास योजनाका लागि भएको भुक्तानीको विवरण हेर्न खोज्यो ।
वानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित होस्टल (छात्रावास) लाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सचेतनात्मक अभियान सुरु गरिएको छ ।
वन संरक्षण र वातावरीय मुद्दामा कलम चलाएबापत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कान्तिपुरकर्मी अब्दुल्लाह मियाँलाई ‘सामुदायिक वन पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ ।
घाँटी दुख्ने तथा श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएपछि ललितपुरकी एक महिला नजिकैको फार्मेसी पुगिन् । विक्रेताले उनलाई ७ दिनका लागि ‘एमोक्ससिलिन×’ औषधि थमाइदिए । डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिना नै औषधि किन्न गएकी उनलाई यस्ता मौसमी भाइरस केही दिनमा आफैं हराएर जान्छ भन्ने थाहा थिएन, सायद । धेरै दिन औषधि खाँदा पनि निको नभएपछि उनी अस्पताल पुगिन् ।
हरियो स्टिकरबिनाका गाडी भदौदेखि बन्द
तपाईंले गाडीको इन्जिन चेकजाँच गराउनुभएको छैन ? वा चेकजाँच गराएर पनि ‘हरियो स्टिकर’ लगाउनुभएको छैन ? सावधान, सरकारले त्यस्ता गाडीलाई भदौदेखि पूर्णरूपमा बन्देज लगाउने भएको छ ।